युगसम्बाद साप्ताहिक - परिवर्तनका संवाहक भनिएका नेताहरू असफल भएकै हुन् ? - यादब देवकोटा
Thursday, 02.20.2020, 09:34am (GMT+5.5) Home Contact
परिवर्तनका संवाहक भनिएका नेताहरू असफल भएकै हुन् ? - यादब देवकोटा
Monday, 12.17.2012, 06:27pm (GMT+5.5)
मुलुकमा छोटोछोटो राजनीति गर्ने नेताहरुले सोचेभन्दा बढी राजनीतिक परिवर्तन भैरहेको छ । २००७ सालदेखि २०६३ सालसम्म आइपुग्दा चारवटा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ तर त्यो परिवर्तनले संस्थागत रुप लिनै पाएको छैन । राजनीतिक परिवर्तनका लागि सडकमा उत्रन एक हुने नेताहरू त्यस पश्चात मुलुक सपार्न कहिल्यै एक हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय चिन्तनशीलता र जनताको दुःखसंग नेताहरुले सरोकार नराख्दा स्थिति अघिल्लो समयको भन्दा कष्टकर हुन पुगेको छ । हरेक पटकको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात नेताहरुले अब आर्थिक, सामाजिक विकास गर्नुपर्छ भन्दै आए पनि त्यही कुरा सर्वाधिक कमजोर हुने गरेको छ । यसो हुनुमा नेताहरूमा विकसित भएको व्यक्तिगत स्वार्थको आकांक्षा सर्वाधिक ठूलो कारक मानिएको छ । फरक विचारका राजनीतिक दलहरूबीच एकमत नहुनु त स्वाभाविकै हो तर एउटै दलभित्र पनि नेताहरूबीच एकमत कायम हुन नसक्दा मुलुकको परिवर्तनको सातो गएको छ । नेताहरूको गलत प्रवृत्ति र व्यक्तिगत आकांक्षाको चुचुरोले मुलुक तहस नहस हुने दिशातिर अग्रसर छ । अहिले मुलुकले जेजस्तो संकट भोगिरहेको छ त्यो स्वाभाविक संकट होइन । हुनै नपर्ने संकट हो यो संकट अरु कसैले सिर्जना गरिदिएको पनि हैन, नेताहरूकै कुकर्मको फल हो ।
त्यसैले देशको राजनीतिले स्वस्थ र स्वच्छ गति लिन सकेको छैन । राजनीतिक दलका नेताहरू उल्टो दिशातिर बुर्कुसी मार्न तल्लिन छन् । कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तै मुलुकलाई कसरी निकास दिने भन्दा पनि कसरी आफ्नो सत्ता टिकाउने र कसरी आफू सत्तामा पुग्ने भन्ने खेल मात्र चलिरहेको छ । नेताहरूले मुलुकलाई निकास दिन भनेर जतिसुकै बैठक गरे पनि निष्कर्ष केही ननिस्केकाले मुलुक यथास्थितिमै लामो समयसम्म रहिरहने र दुर्घटनाको सन्मुखै पुगेको धेरैले भन्न थालेका छन् । राजनीतिक दलहरूले मूल एजेण्डा छोडेर सहायक विषयहरूलाई बढी प्राथमिकता दिएका कारण आम जनतामा व्यापक निराशा र आक्रोश जन्माइरहेको छ ।
मुलुकको तमाम विषयहरू अलपत्र पारेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनमा नै केन्द्रित गराइएको छ । राष्ट्रपतिबाट पटकपटक गरी तीन साताभन्दा बढीको समय दिंदा पनि सहमति हुने संकेत छैन । सहमतिको नाममा झन ठूलो विमतिको खेती भैरहेको छ । सबै नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिको अपरिहार्यताको बखान गरे पनि राष्ट्रिय सहमति स्यालको सिङ बराबर छ । किनभने स्यालको सिङ पाइनु र राष्ट्रिय सहमति हुनु उस्तै उस्तै विषय बनेको छ । सर्वाधिक बढी जिम्मेवारी लिएर शीर्ष तीन दल कहलिएका एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मुलुकलाई निकास दिनुको साटो सकस मात्र बढाइरहेका छन् ।
राज्य चौतर्फी रुपमा संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा जिम्मेवार शक्ति र समूहहरूबाट सकारात्मक सोचाइसहित अगाडि बढ्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकतालाई अहिलेसम्म कतैबाट पहल हुनसकेको छैन । आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि मात्रै एकापसमा सहयात्रा र सहकार्यको बासुरी बजाउन तल्लीन रहने शक्तिहरूको विगतको शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनकार्यमा प्रतिबद्ध भएको रटानले कुनै अर्थ राखेन । शान्ति प्रक्रिया जसोतसो टुंगिने चरणमा छ तर संविधानको त कान्तविजोग छ । अहिले त संवैधानिक संकटको डरलाग्दो स्थिति छ । राष्ट्र दिन प्रतिदिन एकपछि अर्को संकटले घरिंदै छ तर जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले त्यतातर्फ सोच्नै सकेका छैनन् ।
मुलुकलाई निकास दिने बाटोमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहित अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । तर समय छउन्जेल आपसी दन्तबझानमा बिताउने र समय बित्न लागेपछि काम गरेजस्तो देखाउने प्रवृत्ति बारम्बार जागृत छ ।
राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा गम्भीर बहस गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने संसद्लाई उपयोग नै गर्न सकिएको छैन । मुलुकलाई संकटबाट मुक्ति दिलाउने कुनै दृष्टिकोण प्रस्तुत हुन सकेको छैन । अहिलेको आवश्यकता कुनै एक समूहको भन्दा पनि सर्वदलीय स्वरुपको सरकारको हो । त्यस्तो सरकारको नेतृत्व जसले गरे पनि सबै पार्टीहरूको सहभागितामा बन्ने सर्वदलीय सरकारले मात्रै मुलुकलाई निकास दिनसक्छ । यसका लागि सरकारमा बस्नेहरूले दलीय स्वार्थभन्दा मुलुकको हितलाई प्रमुख रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । दलीय स्वार्थकै कारण मुलुक गतिरोधपूर्ण अवस्थामा रहेको हो । राष्ट्रिय सहमति गरेर मुलुकलाई निकास दिने ठोस रणनीति तय हसन सकेको छैन ।
विगत ६ वर्षदेखि राष्ट्रिय सहमतिको नारा घन्काउन थालिए पनि यसबीचमा त्यस्तो प्रयास भएकै छैन । संविधानसभा कायम भएका बेलामा पनि सरकार गठन गर्दा राष्ट्रपतिले सुरुमा निश्चित समय तोकेर सहमतीय सरकार गठन गर्न आव्हान गर्ने, त्यो समयभित्र सहमति नभएपछि पुनः समय थप्ने र अन्तमा बहुमतीय पद्धतिमा जाने काम भएको थियो । अहिले बहुमतीयमा जाने बाटो नै छैन तापनि सहमतीय सरकारको आव्हान भएको छ तर त्यसको कुनै संकेत छैन । परिस्थिति यस्तो देखिए पनि राष्ट्रिय सरकारको कुरा जसले पनि उठाउँछ । तर राष्ट्रिय सरकार भनेको तीन दलको सरकार मात्र होइन भन्ने बुझ्ने प्रयास नै गरिएको छैन । विघटित संविधानसभाभित्र रहेका सबै दलहरूबीच साझा सहमतिको प्रयास हुने गरेको छैन । सत्तापक्ष र विपक्षीबीच गरिने छलफलले सहमतिको वातावरण बन्दैन भन्ने जगजाहेर विषय भए पनि राष्ट्रपतिबाट पनि तीन दल र मधेशी मोर्चालाई नै सहमतिका लागि आव्हान हुनु र उनीहरूलाई मात्र छलफलमा बोलाउनु राष्ट्रिय जिम्मेवारीबोधको पालना भएको मान्न सकिन्न ।
मुलुकलाई निकास दिने भनेर जसरी विमति बढाउने र बाह्य हस्तक्षेप बढाउने खेल भैरहेको छ यसको नतिजा सकारात्मक हुन्छ भनेर कसैले कल्पना गर्न सक्दैन । राजनीतिक दलहरूबीच र दलहरूभित्र मडारिएको असहमति, असमझदारी र गुटबन्दीले मुलुकको भविष्यमाथि ठूलो प्रहार भैरहेको छ । क्षण क्षणमा सहमति र सहकार्यको ढ्वाङ फुक्ने नेताहरूले जुनरुपमा सहमति र सहकार्य गर्नुपथ्र्यो त्यो पटक्कै हुन सकेको छैन । केवल सत्तास्वार्थका लागि मात्र सहमतिको नाटक मञ्चन हुने गरेको छ । यसमा बाह्य शक्तिको चलखेल अर्को कारण हो । बाह्य शक्तिको स्वार्थपूर्तिको गोटी बन्ने प्रतिस्पर्धाले पनि सहमतिमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ ।
ठूलो जिम्मेवारी बोकेका प्रमुख तीन दलहरूबीच बढिरहेको मनमुटावको प्रमुख कारण विदेशी चलखेल अन्तरप्रभाव हो । यस्तो चलखेल कसले कहाँबाट गरिरहेको छ त्यसबारे कोही अनभिज्ञ छैनन् । मुलुकका लागि भन्दा पनि विदेशीको आड भरोसामा विदेशीकै स्वार्थपूर्तिका लागि सत्तामा जाने प्रवृत्तिको निरन्तरताले बारम्बार राष्ट्रघातका दृष्टान्त ओकलिरहेका छन् तर त्यसलाई सुधार्नेतिर कोही पनि अग्रसर छैनन् । सिंहदरबार प्रवेश नेपाली जनताका लागि नभएर अरुकै लागि हुने गरेको अवस्थामा सहमतिको नाटकभित्र गुडुल्किएको बाह्य शक्तिको रणनीतिक खेल महत्वपूर्ण पाटो बनिरहेको छ । त्इसैले सहमति हुन सकेको छैन । राष्ट्रवादी शक्तिहरू कमजोर हुँदै गैरहेको र स्वार्थी शक्ति समूहहरूको बोलवाला बढ्दै गएकाले पनि सहमति हुन नसकेको आम बुझाइ छ । राष्ट्रिय सहमति अहिलेको आवश्यकता हो । तर सहमतिका नाममा आ–आफ्नो आग्रहलाई मलजल गर्ने बाहेक कुनै काम भएका छैनन् । मुलुकको एकमात्र गन्तव्य परिवर्तनलाई संस्थागत गरी आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा जाने भए पनि अहिलेसम्म संविधानकै भविष्य अनिश्चित छ । अन्तरिम संविधानले निर्धारण गरेको दुई वर्ष र थपिएको दुई वर्ष आपसी विवादमै सकियो । अहिले आएर केही गर्छन् कि भन्ने आशा गरिएको भए पनि जेठ १४ गते संविधानसभाको घटन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि निकासको ढोका खुल्न सकेको छैन ।
मुलुक संविधानसभाको विघटनसंगै चरम संकटको दिशातिर उन्मुख छ । विगत ६ वर्षदेखि लगाइँदै आएको सहमतिको रटान अहिले पनि छुटेको छैन तर राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउने र जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने दिशामा कुनै सहमति भएको छैन । सहमतिको रटान केवल सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र हुने गरेको छ । जेठ १४ पछि अहिलेसम्मको समय जसरी बितेको छ त्यसमा राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा दलका नेता विशेषको स्वार्थले प्राथमिकता पाइरहेको छ । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न हुने नहुने जस्तोसुकै कार्य गर्न तयार हुने नकारात्मक प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तोमा वर्तमान प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई अग्रपंक्तिमा देखिनुभएको छ । हुन त उहाँले आफूले गरेका काम र निर्णयहरूको इतिहासले मूल्यांकन गर्छ भन्दै आउनुभएको छ तर उहाँले इतिहासले स्मरण गर्ने के के काम गर्नुभयो भन्ने सवाल महत्वपूर्ण छ ।
क्रान्तिकारी नारा घन्काएर मात्र मुलुक बन्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि ल्याउनुपर्छ । २०६२।०६३ को आन्दोलन सफल भएपछि माओवादीबाट धेरैले आशा गरेका थिए, मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार उन्मुलन हुन्छ, विकासले गति लिन्छ, जनजीवीका सहज हुन्छ र राष्ट्रिय प्रतिष्ठा वृद्धि हुन्छ भन्ने जनअपेक्षा यतिबेल धुमिल भैरहेको छ । सत्ता टिकाउनका लागि प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले गर्नुभएका कार्यहरूको जति आलोचना गरे पनि कम हुने परिस्थितिको निर्माण भएको छ ।
मुलुकको जस्तो परिस्थिति अहिले विकसित छ त्यसबाट निस्कने एउटै निष्कर्ष भनेको राजनीतिक परिवर्तनका संवाहक मानिएका राजनीतिक दलका शीर्ष तहका नेताहरू मुलुकको परिवर्तनका लागि पूर्णतः असफल सावित हुँदै गैरहेका छन् । उनीहरूले आफूहरू असफल हुन बाट बचाउने र यो कालखण्डको कलंकित नेता बन्नबाट बच्ने हो भने अब नेतृत्व युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर राजनीतिबाट सन्यास लिनु नै उपयुक्त उपाय हुनेछ ।
झर्ला र खाउँला को राजनीति तुहिने हो कि ! - महेश्वर शर्मा (12.17.2012)
टी. आई.को कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको भाषण सुनेपछि - तारा सुवेदी (12.17.2012)
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी दोहा सम्मेलन : शक्ति राष्ट्रहरूबीचको बेमेलकै निरन्तरता - यादब देवकोटा (12.11.2012)
(अ)सहमतिको देउसी–भैलो : हातलाग्यो शून्य - महेश्वर शर्मा (12.11.2012)
विफल राष्ट्रपतिसामु चार विकल्प - तारा सुवेदी (12.11.2012)
गरीब राष्ट्रहरुको साझा मुद्दा : जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभाव - यादब देवकोटा (12.03.2012)
पञ्जाछाप लगाउन बाध्य राष्ट्रपति - महेश्वर शर्मा (12.03.2012)
सर्वसत्तावाद र डा. बाबुराम भट्टराई ....... (६) तारा सुवेदी (12.03.2012)
राष्ट्रका लागि अब सुध्रिने मौका आएको छ - यादब देवकोटा (11.28.2012)